Midika ho fiainana mandrakizay ny finoana Azy
"Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay" - Jao. 3:36.
Rehefa mitolo-batana amin'i Kristy ny fanahy, dia misy hery vaovao manjaka ao amin'ny fo vaovao. Misy fanavaozana vita izay tsy hain'ny olona tanterahina na oviana na oviana ho an'ny tenany. Asa ambonin'izay vitan'olombelona izany, izay mitondra hery ambony noho ny an'ny olombelona ao amin'ny toetry ny olombelona. Ny fanahy izay milefitra amin'i Kristy, dia manjary tanàna mimanda ho Azy, izay anjakany eo anivon'izao tontolo izao mikomy Aminy, ary fikasana ny tsy hisian'ny fahefana hafa hekena ao afa-tsy ny Azy irery ihany. Ny fanahy izay voatahirin'ny anjelin'ny lanitra ho an'Andriamanitra toy izany, dia mahatohitra ny fanafihan' i Satana.
Vonona ny handrotsaka ny herin'ny lanitra manontolo i Kristy. Fantany ny fakam-panahy rehetra izay mianjady amin'ny olona, sy ny fahafaha-manao ananan'ny olona tsirairay. Voatombany ny heriny. Hitany ny ankehitriny sy ny hoavy, ary velariny eo anoloan'ny saina ireo adidy izay tokony hotanterahina. Ary mitaona Izy ny tsy hamelana ny zavatry ny tany haharevo loatra ka tsy hotsaroana intsony ny zavatra izay maharitra mandrakizay. —Y1, 05 Jolay 1894
Maimaimpoana ho an'ny olona rehetra ny fanomezana ny fahasoavana amin'ny alalan'i Kristy. Tsy misy afa-tsy ny safidin'ny tsirairay no mety hahavery azy. Efa natolotr'Andriamanitra ho an' izao tontolo izao ny fomba rehetra hahafahan'ny fanahy tsirairay mahazo ny fiainana mandrakizay, dia ny fankatoavana ny didiny, amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy. Efa namaritra toetra izay mifandrindra amin'ny lalany Andriamanitra, ary izay rehetra mahatratra ny fenitra apetrany dia mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'ny voninahitra. I Kristy mihitsy no nilaza hoe: "Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay". — PP, 207
Toerana ambony no ametrahana antsika amin'ny fampitoviana antsika amin 'Ilay ivondronan'ny fahatanterahana rehetra, dia Ilay Mpanjakan'ny lanitra, saingy tena tia antsika fatratra, na dia lavo aza isika, ka tsy misy fiteny mahalaza azy! Noho ny amintsika no namelany ny akanjom-piandrianany, sy nidinany avy teo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Nekeny koa ny hanafiana ny maha-Andriamanitra Azy amin'ny maha-olombelona, ka tonga tahaka ny anankiray amintsika Izy afa-tsy ny amin'ny fahotana, mba ho modely hotahafin'ny rehetra ny fiainany sy ny toetrany, ka hahazoan'ny tsirairay ilay fanomezan-tsarobidy, dia ny fiainana mandrakizay. — YI, 20 Oktobra 1886